Download emulator ugu wanaagsan ee Android u PC, Mac | emulator Android daaqado
Download Emulator ugu wanaagsan ee Android u PC, Mac, Linux
aaro aad waligaa sadaalinayo in ciyaaro kulanka aad jeceshahay android ee Windows PC, Mac ama Linux? Ama kaliya isagoo baaq loo diro Qaramada WhatsApp aad kombuutarka? Horumarinta Technology ayaa u suurta qof kastaaba xiisayn waayo-aragnimo in. Emulator Android u PC, Mac ama Linux markii ugu horaysay ay isticmaalaan app horumarinta si ay u horumariyaan iyo imtixaanka codsiyada ka hor inta ay isticmaali karaan dadweynaha. Maanta, waxaad kala soo bixi kartaa ugu fiican emulators android kaa caawin doona inaad la kordhiyo waayo-aragnimo ee aad mobile on your computer, ka faa'iidaysanaya cabsado user-interface. Emulators Android shabahaya sifooyinka software iyo hardware ee qalabka mobile inkastoo aan shaqo yeedho. Ay caanka ah ee nidaamkan ayaa bilaabay tiro ka mid ah shirkadaha si ay u horumariyaan deferent app emulators android faa'iidooyin kala duwan iyo khasaaraha. Hoos waxaa ku qoran 10-ka sare qiimeeyo emulator Android inay kala soo bixi for Windows;
Tani app emulator android hadda ku faantaa qabo in ka badan 85million users iyo tirinta, waxaa shaki la'aan waa mid ka mid ah emulators ugu fiican android labada user iyo xayeysiiyaha. Tani download emulator android lacag la'aan ah pc si toos ah uga raadsan kartaa codsiyada mobile iyo muujiyaan on interface user ka dib marka la rakibo. Waa kuwee markaas awood u mid si fudud u furo app android ay rabto in aad isticmaasho iyo dhoolacadeynta waayo-aragnimo ah. Sidoo kale, ka hor inta aadan soo dajiyo, waxaa loo baahan yahay inaad soo gasho adiga oo isticmaaleya isticmaale account Google ama xitaa isticmaalaya xisaab aad hadda jira waa in aad qabtid. Waxa xiiso leh, taas app emulator android ayaa riixdo farriimaha daaqadaha samaynta waayo-aragnimo chat yaab leh codsiyada sida WhatsApp iyo Viber. Waxaad BlueStacks ka URL hoos ku soo bixi kartaa
BlueStacks Android Emulator for Windows, Mac, waayo,
GenyMotion waa caan ah oo ay xawaaraha, iyagoo ah kuwii lagu dhisay on naqshadaha x89 la OpenGL iyo taageero xawaaraha hardware. Isku dhafan ee awoodda wax-qabadka iyo processor isticmaalka wanaajiyey sidoo kale keenaysaa arrin kale oo xiiso leh, in ay taageerto codsiga iyo nidaamka qalliinka updates. Iyadoo in ka badan laba milyan oo isticmaala, emulator android, waayo, pc sidoo kale waa fiican ee labada user iyo advertising. Waxaa intaa dheer, waxaa la Timaadda version waxbarasho gaar ahaan jaamacadaha si ay u fududeeyaan horumarka waxbarashada codsiga android. Horumarinta sare ee this app emulator android saamaxaya kuwa isticmaala inay xitaa dooran version of android ay doonayaan in ay ku daydaan oo u ogolaanaya app rakibo dhex feature jiita iyo dhibicda. Si aad u billowdo ku riyaaqayaa, kuwaas oo muuqaalada fantastic on GenyMotion, waxaad u baahan doontaa inaad furatid xisaab daruur GenyMotion ah. Raac xiriirka hoose si ay u tagaan bogga download meesha aad u dhexeeya laba doorasho, shakhsi isticmaalka ama isticmaalka ganacsiga dooran kartaa.
GenyMotion Android Emulator for Windows, Mac, waayo,
Waayo-aragnimada si buuxda android on your computer kani android app emulator mid hoggaaminta. Waxa uu leeyahay interface user deg deg ah oo dareen leh. Muuqan Waxaad codsiga jecel yahay kuwa si aad pc waafajinta kartaa smartphone, jidaynayey aad casriga ah in loo isticmaalo sida rimuut koontaroolka kaas oo ah qalab ama xasaasi ah touchscreen u kumbiyuutarada aan screen taabto. Waxa ay u ogolaataa gaadhsiin riix taas oo ku haboon ee codsiyada bulshada sida WhatsApp iyo Viber, sidoo kale mid ka mid ah u isticmaali kartaa browser desktop kasta oo si toos ah dagsado android in Andy OS. Waxa kale oo ay bixisaa kaydinta aan xad lahayn la siiyo fursad ay ku soo bixi oo wuxuu ku raaxaysan dhammaan codsiyada aad ka fikiri karaa in aad. Si aad ku raaxaysan this app emulator andoid, halkan waxa aad kala soo bixi kartaa;
Tani app emulator android u pc waxaa si rasmi ah loogu sameeyey cadibo android halkan ka waa in aad ka filan waafaqsan fiican codsiga android. Waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo beta version codsiga android by horumarinta halkan ka qoraalkii buuxa mararka qaarkood uu dhib ka sii fiican u shaqeeyo. Waxaad raaci kartaa habka tallaabo-tallaabo rakibo halkan;
Jar oo digir ah waxaa loo sameeyey dadka isticmaala in ay ka faa'iidaystaan ​​ka buuxa digir Android Jelly. Waa caan ah oo ay user interface dareen leh xal sare. Download emulator android u pc halkan;
YouWave emulator android u pc waa ugu caansan in fudud oo degdeg badan si loo soo dajiyo oo waxaa sabab u ah isticmaalka ay processor ka yar. Marka lagu rakibay, way kuu soo ordi karaa Google Play Store oo wuxuu ku raaxaysan tirada xad lahayn codsigaaga android jecel aad pc. Download YouWave emulator android u pc halkan;
Tani app emulator android waa wanaagsan ee ay controllability waxqabadka dhinacyada, waafaqid iyo ciyaaraha users siinaya waayo-aragnimo ugu fiican ee codsiyada android on pc. Waxa xusid mudan, waxa uu siiyaa fursad ay reserved keyboard sida qofka xukuma ah ee ciyaaraha. Waxa kale oo la Timaadda Google Store horay iyo taageerada feature jiita iyo dhibic si loo soo dajiyo codsiyada. Download Droid4X app android emulator halkan;
Windroy waa mid ka mid ah emulator gaarka android u pc sida ay waddaa on Windows yaruna. Waxay leedahay ka yar looga baahan yahay in ay halkan ka rakibi Nuur-miisaanka samaynta. Waxa uu leeyahay saaxiibkiisa kooxda PC iyo app mobile, tani waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay si dhakhso ah u heshaan iyo rakibi app emulator android. Windroy emulator android lagala soo bixi karaa URL hoos ku qoran;
Xamarin emulator android u pc waa arrin wanaagsan waxayna bixisaa ah interface user cajiib ah oo waayo-aragnimo ah ee codsigaaga android on pc. Waxay u baahan tahay Virtual Box iyo waxa badi loogu talagalay app horumarinta android. Waxaa la isu eego ayaa cayayaanka yar haddii ay jiri jiraan. Download emulator ka android u pc ka URL ee kor ku xusan;
32 yara pc：https://xamarin-android-player.s3.amazonaws.com/installer/Windows/Xamarin%20Android%20Player%20x32.exe"
64 yara pc：https://xamarin-android-player.s3.amazonaws.com/installer/Windows/Xamarin%20Android%20Player%20x64.exe"
Tani emulator android u pc leeyahay waayo-aragnimo buuxda oo codsiyada aad jeceshahay oo taageero u multi-taabashada. The fududahay in la isticmaalo interface ka dhigayaa weyn, oo lagu daray waxa ay bixisaa GPS. Waxaad kala soo bixi kartaa emulator ka android u pc ka URL hoos ku qoran;
32 yara pc: http://download.amiduos.com/installer/offline/x64/duos-x64-1.0.11.6157.zip
64 yara pc: http://download.amiduos.com/installer/offline/x86/duos-x86-1.0.11.6157.zip
Price Free Free Free Free Free $19.99 Free Free $ 25 / mnth $ 9.99
Phone sida maamusha X √ √ X X X √ √ X √
Taageerada Horumarinta √ √ √ √ X X X X √ √
Integration Camera √ √ √ X X X X X √
Riix Notifications √ X X X √ X √ X √
> Resource > Mac > Download Emulator ugu wanaagsan ee Android u PC, Mac